१ सय १२ अस्पताललाई कोटा प्रणालीबाट अक्सिजन वितरण, कुन अस्पताललाई कति? :: विवेक राई :: Setopati
१ सय १२ अस्पताललाई कोटा प्रणालीबाट अक्सिजन वितरण, कुन अस्पताललाई कति?
सरकारले अक्सिजनको हाहाकार हुन थालेपछि कोटा प्रणालीबाट अक्सिजन वितरण गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन अभावका बेला वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै कोटा तोकेको हो।
कोटा प्रणालीअनुसार अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गर्नका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र' सिसिएमसीले पाएको छ। सोहीअनुसार सिसिएमसीले १ सय १२ वटा अस्पताललाई दैनिक कति वटा सिलिन्डर पाउने भनेर न्युनतम कोटा तोकिदिएको छ। जसमा अधिकांश अस्पताल उपत्यकाभित्रका छन्।
सबैभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर पाउनेमामा टिचिङ, पाटन, एपिएफ र मेडिसिटी अस्पताल छन्। ती अस्पताललाई दैनिक न्यूनतम ३ सय वटा अक्सिजन सिलिन्डर पाउने भनेर तोकिएको छ। यस्तै अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजलाई दैनिक २ सय ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर तोकिएको छ।
दैनिक २ सय अक्सिजन सिलिन्डर पाउने अस्पतालहरूमा वीर, ह्याम्स र नर्भिक अस्पताल छन्। यस्तै दैनिक १ सय ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर पाउनेमा टेकु अस्पताल, विरेन्द्र सैनिक अस्पताल, स्टार अस्पताल र धुलिखेल अस्पताल छन्।
६ वटा अस्पताललाई भने दैनिक सय वटा अक्सिजन सिलिन्डरको कोटा तोकिएको छ। जसमा ग्रान्डी, अल्का, सिभिल, मनमोहन, किस्ट र कान्ति बाल अस्पताल रहेका छन्।
यस्तै ओम, करुना र हेल्पिङ हेन्ड्स अस्पतालाई दैनिक ७५ वटा अक्सिजन सिलिण्डरको कोटा तोकिएको छ। महेन्द्रनारायण अस्पतालाई ६५ र बयोधा र सहिद ममोरियललाई समान ६० वटा अक्सिजनसिलिन्डरतोकिएको छ।
बाँकी ८८ वटा अस्पताललाई भने दैनिक ५० वटा भन्दा कम अक्सिजन सिलिन्डर पाउने भनेर तोकिएको छ।
तर धेरै अस्पतालहरूले सरकारले कोटा प्रणाली लागू गर्दा थप समस्या आएको बताएका छन्। अस्पतालको माग बढी भएको तर सरकारले कम अक्सिजन उपलब्ध गराएको भन्दै उपचार गर्न नै कठिन भएको ती अस्पतालहरूको भनाइ छ।
बिहीबारसम्म मात्र उपत्यकाका ११ वटा अस्पतालहरूले अक्सिजन अभाव रहेका कारण संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै हात उठाइसकेका छन्। जसमा मेडिसिटी, ग्रान्डी, नेपाल मेडिकल कलेज (सिनामंगल र अत्तरखेलस्थित), ओम, करुना, एभरेष्ट, हेल्पिङ हेन्डस्, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, दीर्घायू, हिमाल र मेडिकेयर अस्पताल छन्। यी सबै अस्पतालले सरकारले तोकेको कोटाबाट प्राप्त हुने अक्सिजन सिलिन्डरले माग नधान्ने भन्दै संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि अहिले अक्सिजन अभाव रहेको जनाएको छ। अहिले दैनिक १५ हजार अक्सिजन सिलिन्डरको माग भएपनि करिब १० हजार वटा मात्र पुर्याउन सकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही कारण केही अस्पतालहरूले सार्वजनिक रूपमै अक्सिजनको हाहाकार भएकाले बिरामीको उपचार गर्न नसकिने भन्न थालेपछि मन्त्रालयले बुधबार मात्र सय बेड माथिका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले १५ दिनभित्र आफैं अक्सिजन प्लान्ट जोड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पनि अस्पतालको माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकिएको जनाएका छन्। शंकर ग्यासका सञ्चालन शंकर अग्रवालले अक्सिजनका लागि भनेर तारान्तार फोन आउने सुनाए। 'रातभरी सत्न पाएको छैन। कहिले गृहसचिव, कहिले सिडिओ त कहिले अस्पतालहरूको निर्देशकले फोन गर्नुहुन्छ तर आवश्यक अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिएको छैन।'
अहिले उपत्यकामा ८ वटा उद्योगहरूले अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेको छ। जसमा शंक अक्सिजन, कान्तिपुर अक्सिजन, सगरमाथा अक्सिजन, नवज्योती अक्सिजन, सती प्रोडक्टस, सोपान अक्सिजन, हिमाल अक्सिजन र हाम्रो अक्सिजन प्रालि रहेका छन्। सिसिएमसीले यीनै ८ वटा उद्योगहरूलाई कोटा अनुसार १ सय १२ वटा अस्पतालहरूलाई अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गर्नु भनेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८, १०:४३:००